ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး | AnZarTone
by AnZarTone ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး
၁။ ခြင် (Mosquito)
ရိုးရိုး အမြင်အားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ” ခြင် ဆိုတဲ့ အကောင်တွေက ဘာအန္တရာယ် ရှိလို့လဲ ..? ” ဆိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ …။ ခြင်တွေက အရွယ်အစားအားဖြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်သည်းခွံလောက်တောင် မရှိပါဘူး။ လာကိုက်သလား …၊ ဖြတ်ခနဲ ရိုက်သတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခြင်ဆိုတဲ့ အကောင်တွေက တကယ့်ရောဂါပိုးတွေကို သယ်ဆောင် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာ့ လူသတ်သမား အကြီးစားတွေ လို့တောင်မှ သတ်မှတ်ထားကြပါသေးတယ်။
ခြင်တွေ သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကတော့ အများသိကြတဲ့ အတိုင်း ငှက်ဖျား၊ ဆင်ခြေထောက်၊ West Nile Virus ဆိုတဲ့ ရောဂါပိုးတွေပါပဲ။ ဒီထဲမှာ အန္တရာယ် အကြီးဆုံးကတော့ ငှက်ဖျား ရောဂါပိုးပါပဲ။ ဒီရောဂါ ကူးစက်ခံနေရသူ အရေအတွက်ဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ တစ်ဝက်ခန့် ရှိတယ်လို့ WHO မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခြင်တွေကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ တစ်နှစ်ကို ၂ သိန်းမှ ၃ သိန်းကြား ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂။ အဆိပ်ပြင်းသော မြွေများ (Venomous Snakes)
မြွေတွေကို ဒီစာရင်းထဲ ထည့်တာတော့ မလွန်လောက်ပါဘူး။ မြွေကိုက်လို့ အသက် အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသူတွေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပါ။ ဒီထဲမှာ တောဘက်က ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနဲ့ မနီးစပ်တဲ့ လူတွေ ပိုပြီး ခံစားရပါတယ်။ အချို့ဆို ဘာမြွေကိုက်လို့ ကိုက်သွားမှန်း မသိလို့ ဆေးမှား ထိုးမိပြီး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ထားပါ။ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေမျိုးစိတ်ပေါင်းဟာ ၄၅၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြွေကိုက်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ မြွေဆိပ်ဟာ သွေးကြောကနေတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားစေပါတယ်။ အဆိပ်ပြင်းလေ ဆေး မမှီလေပေါ့ဗျာ။
အဆိပ်ပြင်း မြွေဆိုးတွေကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ တစ်နှစ်ကို ၅၀ ကနေ ၁၂၅၀၀၀ ကြားမှာ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၃။ ကင်းမြီးကောက် (Scorpion)
ကင်းမြီးကောက် ကိုက်လို့ သေတယ် ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကြားဖူးနားဝ အတော်လေး နည်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေဟာလည်း အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေပါတဲ့။ တစ်နှစ်ကို ကင်းမြီးကောက်ကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ ၈၀၀ ကနေ ၂၀၀၀ ကြားမှာ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၄။ ကြောင်ကြီးများ (Big Cats)
ကြောင်ကြီးများဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် ကြောင် အကြီးစားတွေကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ ကျားသစ် စတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီကောင်တွေရဲ့ အန္တရာယ် များပုံကတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်ပါဘူး။ သူတို့ကတော့ ခွန်အားနဲ့ အန္တရာယ် ပြုတတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေပါပဲ။ ဒီကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်တွေကြောင့် တစ်နှစ်ကို သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ ၈၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၅။ မိကျောင်း (Crocodile)
မိကျောင်းတွေဟာ ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ် အများဆုံး တိရစ္ဆာန်တွေထဲက တစ်ကောင်ဆိုရင် အားလုံးပဲ လက်သင့် ခံနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခြွင်းချက်အားဖြင့် ဆိုရင်တော့ မိကျောင်းကို ထူးထူးခြားခြား အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးတဲ့လူတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ထားပါ။ မိကျောင်းတွေ ထဲမှာဆိုရင် အာဖရိကနဲ့ သြစတြေးလျ က မိကျောင်းတွေက ပိုပြီး အန္တရာယ် များတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ ရေထဲမှာဆိုရင် ရေဘုရင်လို့ ဆိုရလောက်အောင်ပဲ သူတို့ရဲ့ ရွှေ့လျားမှုနှုန်းဟာ မြန်ဆန်လှပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ မေးရိုးကလည်း ဖမ်းမိထားတဲ့ သားကောင်ကို ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်း မရှိလောက်အောင် ခိုင်မာလွန်လှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိကျောင်းတွေကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၆၀၀ မှ ၈၀၀ ကြားမှာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၆။ ဆင် (Elephant)
ဆင်တွေကိုလည်း ဒီစာရင်းထဲမှာ နံပါတ် ၆ နေရာက သွပ်သွင်းထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အင်အား၊ ပြီးတော့ အစွယ်တွေက လူတွေကို အသာလေး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြာနီကန် ဆရာတော်ရဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာတော့ ဆင်ဝင်စား လူတစ်ယောက် ပြောပြသွားပုံလေးကို ဟောထားပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ပြောသွားတာက လူ့ဘုန်းကံ ပေါ့ဗျာ။ လူ့ဘုန်းကံ မြင့်နေချိန်မှာဆိုရင် ဆင်တွေရဲ့ အမြင်မှာ လူဟာ သူတို့ထက် ကြီးမားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်လို့ မြင်နေရပြီး ကြောက်ရွှံ့ကြပါတယ်။ လူ့ဘုန်းကံ နိမ့်နေချိန်မှာတော့ ဆင်တွေရဲ့ အမြင်မှာ လူဟာ သူတို့ရဲ့ ခြေဖဝါးအရွယ်လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ မြင်ကြောင်းကို ပြောပါတယ်။ လူ့ဘုန်းကံ နိမ့်နေချိန်မှာ ဆင်တွေက လူကို မလုပ်ချင်တာနေမယ်။ လုပ်ရင် အသေပဲလို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ဆင် အကြောင်း စပ်မိတုန်းပေါ့ ခင်ဗျာ။
ဆင်တွေကြောင့် သေဆုံးမှု နှုန်းကတော့ဖြင့် တစ်နှစ်ကို ၃၀၀ ကနေ ၅၀၀ ကြား ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၇။ ရေကြံ့၊ ရေမြင်း (Hippopotamus)
ဒီအကောင်တွေကတော့ အာဖရိကမှာ အတွေ့ရများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ညှာတာ စာနာမှု အကင်းမဲ့ဆုံး တိရစ္ဆာန်တွေလို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ ရေထဲမှာရော၊ ကုန်းပေါ်မှာပါ ရှင်သန် နေထိုင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအကောင်ကြီးတွေရဲ့ပါးစပ်တွေဟာ လေးပေအထိ ဖွင့်ဟနိုင်ပြီး တူမကြီးနဲ့ ရိုက်ချလိုက်သလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပိတ်ဆို့ ဖမ်းယူ နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို အကျင့်စရိုက်ကြောင့်ပဲ သူတို့ကို ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်များတဲ့ တိရစ္ဆာန် စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေကြံ့၊ ရေမြင်းတွေကြောင့် သေဆုံးမှု နှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၁၀၀ ကနေ ၁၅၀ ကြားမှာ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၈။ ဂျယ်လီငါး (Jellyfish)
ဒီဂျယ်လီငါးတွေရဲ့ အသွင်ကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်လည်း ကောင်းလှပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ သူတို့ အန္တရာယ်များတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သိပ်ပြီး မသိပါဘူး။ သိတဲ့လူတွေ ရှိရင် ပြောပေးစေလိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျယ်လီငါးတွေကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၁၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Jellyfish-Wikipedia
၉။ ငါးမန်း (Shark)
ငါးမန်းလို့ ဆိုလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေဟာ ချွန်မြလှတဲ့ သွားတွေနဲ့ ရေပြင်ထဲက ကြောက်မက်ဖွယ် တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်လို့ မြင်မိကြမှာပါ။ ငါးမန်း ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတိုင်း ငါးမန်းကို ရွှံရှာ ကြောက်ရွှံ့ကြသလို၊ ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း သွေး ရေသို့ မကျစေဖို့ သတိထားမိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ငါးမန်းတွေလောက် အပြင်က တကယ့်လက်ရှိ ငါးမန်းတွေက မဆိုးဝါးလှဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့လည်း သူတို့ဟာ ရက်စက် ဆိုးဝါးလှတဲ့ လူသတ် တိရစ္ဆာန်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ငါးမန်းတွေကြောင့် တစ်နှစ်ကို သေဆုံးမှုန်နှုန်းဟာ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၀။ ဝက်ဝံ (Bear)
ဝက်ဝံ တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အချစ်ခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အဖြစ် မိတ်ဖွဲ့လို့ ရနိုင်သလို၊ သူတို့ကို ပွေ့ဖက် ပွတ်သပ်ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ကစားနေလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် သူတို့ကို အန္တရာယ် များတဲ့ တိရစ္ဆာန် စာရင်းထဲ ထည့်ထားရတာလဲ ??? ဟုတ်ကဲ့။ တောနက် ထဲမှာ ဝက်ဝံ တစ်ကောင်နဲ့ ရင်ဆိုင် တွေ့ရတဲ့အခါ မျိုးမှာ သင် သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဝံ မျိုးကို ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ ဝက်ဝံ တစ်ကောင်နဲ့ ရင်ဆိုင် တွေ့ပြီဆိုရင် အသက်ပါ ပါသွားနိုင်လောက်အောင် အန္တရာယ် များလှပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီစာရင်းထဲ ထည့်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဝံတွေကြောင့် သေဆုံးမှု နှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၅ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက်ကြား ဖြစ်ပါတယ်။
မှီငြမ်း – http://scienceray.com
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged wild animals. Bookmark the permalink.
← အကောင်းဆုံး Internet Browser များ	Gmail Password ဟက်နည်း →
One thought on “ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး”	jumperninja January 22, 2013 7:56 pm ခြင်တွေကတော့အဆိုးပါပဲ